Malware yakanangana neLinux zvishandiso yakawedzera 35% muna 2021 | Linux Addicts
Malware yakanangana neLinux zvishandiso yakawedzera 35% muna 2021
Una yenhema huru nengano dzatinowanzonzwa uye kuverenga kazhinji ndiko kuti mukati "Linux hakuna mavhairasi", "Linux haisi yakanangana nevanobira" uye zvimwe zvinhu zvine chekuita ne "Linux inodzivirirwa", izvo manyepo zvachose ...
Ko kana tikakwanisa kuisa hafu yechokwadi nehafu nhema, ndeyekuti Linux haina huwandu hwakafanana hwemarware uye kurwiswa nevapambi. Izvi zvinokonzerwa nechikonzero chakareruka uye chiri nyore, sezvo mumusika welinux haimiriri kunyange 10% yemakomputa ese edesktop, saka hazvibatsiri (sekutaura) kushandisa nguva yakawanda nesimba.
Asi kure nazvo, izvo hazvina kuisa toni kune huwandu hwehutachiona hwemarware hwakanangana neLinux zvishandiso hunoramba huchikwira uye ndezvekuti kune izvo zvaive 2021 huwandu hwakawedzera ne35% uye izvi imhaka yekuti maIoT maturusi anonzi anowanzo kurwiswa neDDoS (kuparadzirwa kurambwa kwesevhisi).
IoTs inowanzo "smart" zvishandiso zvine simba rakaderera iyo inomhanyisa kwakasiyana Linux kugovera uye inogumira kune chaiyo mashandiro. Asi zvakadaro, kana zviwanikwa zvavo zvabatanidzwa kuita mapoka makuru, vanogona kutanga kurwisa kukuru kweDDoS kunyange muzvivako zvakachengetedzwa zvakanaka.
Pamusoro peDDoS, Linux IoT zvishandiso zvinonyorerwa kumigodhi cryptocurrency, kufambisa spam mishandirapamwe, kuita senge relay, kuita sekuraira uye kutonga maseva, kana kutoita senge nzvimbo dzekupinda kune data network.
Chirevo kubva kuCrowdstrike kuongorora data rekurwisa kubva 2021 inopfupisa zvinotevera:
Muna 2021, pakanga paine kuwedzera makumi matatu neshanu muzana mune malware yakanangana neLinux masisitimu kana ichienzaniswa ne35.
XorDDoS, Mirai, uye Mozi ndidzo mhuri dzaive dzakanyanya kuwanda, dzichiverengera makumi maviri neshanu muzana ezvese malware kurwisa kwakanangana neLinux yakaonekwa muna 22.
Mozi, kunyanya, yakaona kukura kwakanyanya mubhizinesi, nekagumi masampuli akawanda anotenderera mugore rapfuura zvichienzaniswa negore rakapfuura.
XorDDoS yakaonawo inoshamisa 123% gore-pamusoro-gore kuwedzera.
Uye zvakare, inopa pfupiso yakajairika yeiyo malware:
XordDoS: ndeye Linux Trojan inoshanda zvakasiyana-siyana inoshanda pane akawanda Linux system architectures, kubva kuARM (IoT) kusvika kux64 (maseva). Inoshandisa XOR encryption yeC2 kutaurirana, saka zita rayo. Paunenge uchirwisa zvishandiso zveIoT, brute manikidza XorDDoS midziyo isina njodzi kuburikidza neSSH. Pamichina yeLinux, shandisa port 2375 kuti uwane isina password midzi yekuwana kune iyo host. Mhosva yakakurumbira yekugovera iyo malware yakaratidzwa muna 2021 mushure mekunge mutambi wekuChina wekutyisidzira anozivikanwa sa "Winnti" akaonekwa achiiendesa pamwe nemamwe mabhoti anotenderera.
Mozi: iP2P (peer-to-peer) botnet inovimba neDistributed Hash Table Lookup (DHT) system kuviga zvinofungira C2 kutaurirana kubva kune network traffic monitoring mhinduro. Iyi chaiyo botnet yanga iripo kwenguva yakati rebei, ichiramba ichiwedzera kusagadzikana kutsva uye kuwedzera kusvika kwayo.
Tarisa: ibhotnet ine mukurumbira wakashata yakaburitsa maforogo mazhinji nekuda kweiyo inowanikwa pachena kodhi kodhi uye inoramba ichitambudza nyika yeIoT. Izvo zvakasiyana-siyana zvinotorwa zvinoshandisa akasiyana maC2 ekutaurirana maprotocol, asi ese anowanzo shandisa zvisina kusimba zvitupa kuzvimanikidza kuita zvishandiso.
Zvinoverengeka zvinosiyana zveMirai zvakafukidzwa muna 2021, senge "Rima Mirai," iyo inotarisa pama routers epamba, uye "Moobot," inonangana nemakamera.
"Mimwe yemhando dzakasiyana-siyana dzinoteverwa neCrowdStrike vaongorori dzinosanganisira Sora, IZIH9, uye Rekai," CrowdStrike muongorori Mihai Maganu anotsanangura mumushumo. "Kuenzaniswa na2020, huwandu hwemasampuli akaonekwa kune aya matatu akasiyana akawedzera ne33%, 39%, uye 83%, zvichiteerana, muna 2021."
Zvakawanikwa naCrowstrike hazvishamise, kubvira simbisa muitiro unopfuurira wakabuda mumakore apfuura. Semuyenzaniso, Chirevo cheIntezer chinotarisa nhamba dze2020 chakawana kuti Linux malware mhuri dzakakura 40% muna 2020 zvichienzaniswa negore rapfuura.
Mumwedzi mitanhatu yekutanga ya2020, kwakave nekuwedzera kukuru kwe500% muGolang malware, zvichiratidza kuti vanyori vemalware vari kutsvaga nzira dzekuita kuti kodhi yavo ishande pamapuratifomu akawanda.
Iyi hurongwa, uye nekuwedzera maitiro ekunongedza, yakatosimbiswa muzviitiko kutanga kwa2022 uye inotarisirwa kuenderera mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Malware yakanangana neLinux zvishandiso yakawedzera 35% muna 2021
mutsauko ndewekuti zero zuva palinux rinowanzo batwa mukati meisingasviki vhiki (kazhinji) uye paWindows mamwe haana kumbogadziriswa.
Musiyano ndewekuti Linux's architecture uye mvumo system inoita kuti zvinyanye kuoma kuwana mvumo dzakasimudzwa kubva kuaccount yemushandisi ...
Uye mutsauko ndewekuti rakawanda rebasa iri rinoitwa neakavhurika sosi vanozvipira uye kwete nemakambani makuru anogadzira kodhi yevaridzi kutivanzira zviri kuitika pasi. Iyo Opensource inoongororwa nyore nyore.
Asi hee, wataura chokwadi nezvechinhu chimwe, kana vashandisi vako vakawedzera, zviwanikwa zvekuvarwisa uye kuongorora kusasimba zvichawedzera kana iwe ukakwanisa kuwana hupfumi kudzoka nazvo.
Saka inhau dzakanaka kuti Linux malware iri kuwedzera. :)
Pindura kuna Zentolas
Uye muIoT ichave 100% kukanganisa kwemugadziri, chigamba chevazhinji Xiaomi routers vanoshandisa OpenWRT chakaburitswa mazuva maviri mushure mekunge vatapukirwa naMirai, Xiaomi yakagadziridzwa svondo rega rega. Vamwe vazhinji vakaita seTP-Link inoshandisawo OpenWRT haina kumbovandudzwa
Nanhasi kune michina yekuwachisa yakabatwa naMirai uye haisati yavandudzwa, ichingova chigamba chavanofanira kutanga.
Sezvakaitika nemasevha eHP, havana kumbobata Java uye yaive njodzi yakavharwa makore maviri apfuura
WINE 7.0-rc6 inosvika ichigadzirisa 47 bugs uye nekuvandudzwa kwakawanda kwemitambo yemavhidhiyo
GNU Linux-Libre kernel 5.16 yakaburitswa